Isethulo sokuhlonipha uDkt. Peter Magubane ngu David Meyer-Gollan
Izithombe zikhuluma kakhulu
Kusukela kwimigwaqo yasemalokishini kuya ekutholeni amandla, uPeter Magubane uchithe ngaphezulu kweminyaka engamashumi amahlanu engumthwebuli wezithombe zomzabalazo owawumelene nobandlululo kanye nezinye izindaba ezikhungethe imiphakathi.
Phakathi kwaleminyaka wabanethuba lokwazana noNelson Mandela kangcono – okukuqala njengomholi owayesemusha wezepolitiki owayesedume kakhulu ezweni lonkana nangesikhathi esengoqhakambile ekulwelweni ubandlululo. Ngokuhamba kweminyaka kwakekha ubudlelwano obuqinile phakathi kwalabasopolitiki ababili – omunye wayekhuluma ngamazwi nangezenzo, omunye wayekhuluma ngomshini wakhe wokuthwebula izithombe ikhamera.
Ngemuva kokukhululwa kuka Mandela ngo 1990. uMangubane waqokwa ukuba abe ngumthwebuli wakhe wezithombe ngokumisiweyo okusemthethweni ukushicilela kahle okwakwenzeka kuguquko lweNingizimu Afrika kwiminyaka emine yentando yeningi. Kusukela kulesosigaba, wasebenzisa amathuba amaningi okuthwebula aqhamuka ngedlela kuyongenwa kumbuso omusha wezepolitiki. Ngokucacile, uMagubane wayenethuba elingevile kuMandela kanye nakumndeni walo.
Umsebenzi ayewenza owawunempumelelo enkulu
u-DktPeter Magubane ongomunye wabathwebuli bezithombe wase Ningizimu Afrika owaziwa umhlaba wonke. Waqala uhambo lwekhono lomsebenzi wakhe ngo 1954 nephephabhuku i-Drum, labe selimholela kukujula kwenhliziyo yemikhankaso eyayimelene nobandlululo.
Emva kweminyaka ayisebenza kwa-Drum, wabonisa izithombe zakhe kwelase Europe wabe eseyoqhuba imfundo kwelase Melika. Ubeye kwelengabandi ngo 1966, wabe esejoyina ukuyosebenzela iphephandaba i-Rand Daily Mail.
Phakathi kwisikhathi sika 1969 kuya ku 1971 uPeter wachitha izinsuku ezigcwele ezingu 586 eseluvalelweni lwakhe yedwa nokwalandela ukube amiswe ukuthwebula izithombe iminyaka emihlanu. Kusukela ngeminyaka yo 1980, uPeter wasebenzela futhi iphephebhuku iTime magazine.
Ngo 1990 waqokwa ukuba abe ngumthwebuli wezithombe ka Nelson Mandela ngokumisiweyo okusemthethweni ukushicilela kahle okwakwenzeka kuguquko lweNingizimu Afrika kumbuso omusha wezepolitiki.
uPeter Magubane wamukeliswe ngezindondo eziningi zokumhlonipha ngokuzinikela kwakhe nomsebenzi omkhulu awenzile emkhakheni wezokuthwebulwa kwezithombe. Phakathi kwalezi indodo ye- Mother Jones-Leica Lifetime Achievement Award, indondo ka Martin Luther King Luthuli, isethulo sokumhlonipha kwisikole sezobunthatheli i-Tom Hopkinson, kanti uhlonishwe ngeziqu zobuDokotela ezine ngamanyuvezi ahlukene alapha eNingizimu Afrika.
Ukwengeza, waba ngowokuqala onsundu waseNingizimu Afrika ukwamukeliswa indodo ngokuthwebula kwakhe izithombe – ngo 1958 izithombe zakhe zaqokwa njengeziphambili kwezokushicilela. Namahlanje u-Peter Magubane ubhekisa umshini wakhe wokuthwebula kwizindlela zokuphila nakumasiko abantu baseNingizimu Afrika.